Ahoana ny fomba hamerenana ny trosa ara-barotra any UAE amin'ny fomba matihanina | Orinasa Mpampanoa lalàna
Androany, hahita lalàna be dia be ianao manarona trosa ara-barotra amin'ny fomba fanangonana UAE, miaro ny mpampindram-bola sy ny mpampindram-bola. Miovaova ny lalàna arakaraka ny ifandraisan'ny fanangonana trosa amin'ny trosa arahin'antoka na varin'ny mpanjifa. Inona no mahasamihafa azy?
Ahitana mpanjifa ny mpanjifa ho an'ny mpanjifa, iza no mpitrosa, ary koa ny asa fanangonana eo amin'ny orinasa iray, izay ho mpampindrana. Ity karazana fanangonana trosa ity dia voafehy tsara kokoa noho ny mifanila aminy.
Etsy ankilany, misy lalàna any UAE hiantohana ny fiarovana ny tsiambaratelon'ny mpampindram-bola amin'ny mpanjifa. Hatao hanoherana ny fomba fanao andoavan'ireo mpanangona trosa. Fanampin'izay, manome toerana iadian-kevitra momba ny fifanolanana izy ireo, misy sazy napetraka amin'ireo mpamory mahantra ary manome fanamarinana ny torohevitra momba ny trosa amin'ireo mpanjifa.
Ny fanangonana trosa ara-barotra dia tafiditra fanangonana trosa ataon'ny orinasa iray hafa. Eto dia heverina fa ny orinasa dia fifehezana ampy hahafantarana ny zony manokana sy ny adidy ara-bola. Noho izany, ny fanangonana trosa ara-barotra dia tsy voafehy.
Fantatra tsara fa anisan'ireo tombony lehibe hividianana a matihanina trosa arahin'antoka amin'ny UAE dia ny fahalalana mahazatra azy ireo amin'ny lalàna mifandraika amin'ny raharaha manokana. Ny fanangonanao trosa irery, raha mbola mijanona ao anaty lalàna ianao dia mety ho ezaka mampatahotra. Izany indrindra indrindra rehefa miatrika vondrona trosa mpanjifa.
Io dia mamela ny fomba hafa tsy mitovy ataon'ny masoivoho fanangonam-trosana amin'ny fitakiana rehetra.
Ny lakile eto dia miharihary amin'ny fahaizan'ny mpanangona trosa, na any UAE, Dubai, Abu Dhabi na Sharjah. Ireo mpamory trosa mpanjifa dia manana fahaiza-manao isan-karazany raha oharina amin'ireo mpanangona trosa ara-barotra; na banky sy orinasa lehibe aza, manakarama matihanina hamerenana trosa arahin'asa varotra ao amin'ny uae.
Ny faniriana dia ny hitazomana fifandraisana tsara amin'ny mpanjifa, noho izany ny mpanangona dia tsy maintsy mitazona fifandanjana marefo rehefa mahazo vola. Na eo aza izany, misy serivisy mitantana fanangonana avy amin'ny orinasa sy avy amin'ny olona.
Iza no tsara kokoa: Professional momba ny trosa amin'ny mpanjifa na amin'ny varotra?
Azonao atao ny mahita cons and pros amin'ny karazana trosa tsirairay. Ny trosa amin'ny mpanjifa dia mitaky lalàna sy fitsipika mifehy, raha mbola Ny fanangonana trosa ara-barotra dia mety mila fahaizana manokana mba hitazonana ny fifandraisana amin'ny mpanjifanao. Na ahoana na ahoana, ny fanangonam-trosa dia mety ho sarotra be loatra. Na iza na iza miezaka manangona trosa dia mazàna mijinja ny tombontsoa azo avy amin'ny fanampiana ara-bola trosa arahin'asa arahin'asa.
Ahoana raha tsy te handoa ilay mpampindram-bola?
Raha toa ka tsy mijery ny drafitra fandoavam-bola na tsy hanangona ny vola ny defaulter dia manao fitsarana ara-dalàna amin'ny mpampindram-bola ny maso misahana ny trosa. Ny orinasa dia mety manana mpisolovava ao an-trano na mety hiara-hiasa amin'ny orinasa mpisolovava mba hanatanterahana ny fomba ara-dalàna ary ahafahan'ny trosa mandamina ny trosa.
Matihanina fanarenana trosa mamela anao hamerina vola anananao amin'ny alàlan'ny fampiasana ekipa manam-pahaizana mpikaroka sy mpanangona. Rehefa mazava fa tsy manana fikasana hamerina ny vola ny mpitrosa dia mihetsika ireo matihanina ary mamela anao hamerina ny volanao amin'ny alàlan'ny fanapahan-kevitra nifampiraharaha tamina matihanina. Amin'ny toe-javatra maro dia mandrindra fihaonan'ny mpampindram-bola sy ny trosa izy ireo mba hahafahana manangana fifandraisana izay hanampy anao hamerina ny vola.
Hita matetika fa ny ezaka ataon'ny isam-batan'olona amin'ny famerenana ny vola nindramina dia niafara tamin'ny tsy fahombiazany noho ny paikady fanemorana isan-karazany nofidin'ireo trosa mba hisorohana ny fandoavana ny vola. Ny fisoratana anarana amin'ny fanampiana ireo matihanina manangona trosa no fomba tokana ara-dalàna ahazoana ny vola azonao rehefa namoaka fanaraha-maso dud.
Fa maninona no avotra indray ny trosa arak'asa amin'ny alàlan'ny fahazoana manao asa soa?
Ireo matihanina amin'ny orinasa fanarenana trosa dia mahatakatra ny fomba tsara indrindra hiatrehana ireo toerana fanarenana sarotra. Amin'ny fampiasana ny fahaizany mahatalanjona dia fantatr'izy ireo izay teknika mety indrindra amin'ny olona iray. Amin'ny fampiasana ny habetsaky ny tsindry ary koa ny paikady marina dia mandresy ireo mpanangona trosa rehefa tsy nahomby ny hafa. Ireo matihanina ao amin'ny orinasa dia naseho fa mahomby amin'ny fahazoana ny vola nindraminy, miaraka amin'ny manahirana kely.
Ny fampiasana ireo matihanina manangona asehoy amin'ny mpitrosa aminao fa matotra ianao momba ny fananana io vola ao amin'ny rafi-bolanao io.
Matetika ny fomba fitadiavana dia manomboka amin'ny antso an-tarobia mba hampahafantarana ny trosa fa ny matihanina dia mandray ny fomba fanarenana trosa. Tsy izany ihany fa ampahafantarina azy ireo ny fiantraikan'ny tsy fandoavana. Voalamina ny fitsidihana tsirairay rehefa tsy mandeha ny fifanakalozan-kevitra amin'ny alàlan'ny telefaona.
Ny fanarenana trosa ara-barotra dia ny famerenana ny vola tsy manara-dalàna avy amina orinasa (mpampindram-bola) ho an'ny orinasa hafa (mpampindrana).
Ataon'ny antoko fahatelo amin'ny fomba nentim-paharazana (masoivoho mpanangona trosa) izay tsy tafiditra tamin'ny fifanarahana voalohany teo amin'ny antoko voalohany (mpampindrana) sy ny ankilany (famoahana trosa).
Ny trosa ara-barotra dia aseho amin'ny trosa nateraky ny fandaminana iray. Safidy ankafizin'ny mpampindrana maro ny fanarenana trosa amin'ny alàlan'ny DCA (Agency of Debt Collection) satria tsy dia mandany fotoana firy ity fanangonana ity.
Ankoatr'izay, ny vidiny dia mahomby kokoa noho ny fanarenana trosan'ny antoko voalohany. izay misy ny fomba fanangonana atao ao anatin'ny sampan'ny orinasa mpampindram-bola. Ny serivisy fanarenana trosa raharaham-barotra dia manana fahazoan-dàlana ary miasa ao anatin'ny masontsivana amin'ny serivisy vondrona ara-dalàna sy etika.
Ny fanarenana trosa ara-barotra dia antsoina koa hoe fanangonana trosa B2B na "business-to-business". The Ny trosa B2B dia maneho ny fandaharana famindram-bola ho an'ny fampiasam-bola orinasa na orinasa.
Ny famerenan'ny trosa ara-barotra dia misy ny fomba fanangonam-bola mialoha sy ara-dalàna ary koa fitaovana ho amin'ny fahombiazan'ny famerenana vola am-pahavitrihana efa voatahiry sy saro-takarina.
Ahitana ireto serivisy manaraka ireto: endrika fifandraisana samihafa, toy ny antso an-tariby, mailaka, taratasy sns. fitsidihana manokana an-trano; mpisolovava amin'ny trosa ary mpikarakara mpikarakara momba ny trosa mikarakara teti-bola isan-karazany sns.
Ny fahazoana trosa amin'ny vola indram-bola izay nomenao dia azo atao amin'ny mpanangona trosa matihanina. Izy ireo dia mamela anao hamerina ny indram-bola.